တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ဆုံတွေ့ကြတဲ့အခါ ...
Posted by မေဓာဝီ at 11:46 AM
2/06/2013 2:06 PM
“လမင်းအကြွေကိုကောက်၊ အိမ်အရောက် ပြန်ခဲ့ပါရစေ..” တဲ့လား...၊
ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်လုံးက အိမ်ကို သတိရ၊ တမ်းတခြင်း တွေနဲ့ ပြည့်လို့ပါပဲ မမေရေ...၊ ကိုယ်က ကြိုတွေးပြီး စိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်ကို တကယ့် လက်တွေ့မှာ နေထိုင်ရှင်သန်ခွင့်လည်း ရရော တစ်ထပ်တည်း ကျမနေတဲ့ အဖြစ်တွေ ကျနော်လည်း ကြုံဖူးတယ်၊ တခါတလေမှာ အီလည်လည်...၊ တခါတလေတော့လည်း ပြုံးချင်စရာ...၊း)
ကာရန်ညီသော ကဗျာတွေ ဖွဲ့သီနိုင်မယ့် အချိန်တွေ အမြန်ဆုံး ရောက်လာပါစေ မမေရေ...။
2/06/2013 5:31 PM
အိမ်လွမ်းကဗျာလေး ဖတ်သွားပြီ မမေရေ။ အချိန်အခါနဲ့ နေရာဒေသပေါ်မှီပြီး ခံစားချက်ကလေးတော့ ပြောင်းသွားမှာအသေအချာပါ။
2/06/2013 5:42 PM
Ma May Dar Wi,
I have seen this one on Ko Harry Lwin's blog since 2011. This poem responded to the one Ko Harry wrote. I even like this one better than Ko Harry's version. I, however, am confused with the poet. When I saw this on his blog, it was written by "Khin Khin." I was able to walk through Khin Khin's blog at that time. Her blog did not havealot of posts or poems. It was just few stuff. Is "Khin Khin" your another pen name?
2/07/2013 4:42 AM
(မ)သောကြာမေ ... အမြဲအားပေးတာ ကျေးဇူးပါရှင်။
ဟုတ်တယ် ... ကိုညီလင်း ... အိမ်ကို သတိရတဲ့အချိန်မှာ ရေးခဲ့တာမို့ ကဗျာတပုဒ်လုံးက သတိရခြင်းတွေ ပြည့်နေခဲ့တယ် ... ။ မမေလဲ အခု အီလည်လည်နဲ့ ပြုံးနေရပေါ့ :) ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
တီတင့် ... စာလာဖတ်တဲ့အတွက်ရယ် ဆုတောင်းပေးတဲ့အတွက်ရယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ တီတင့်အိမ် လာဖြစ်အောင်လဲ ကြိုးစားပါအုံးမယ်။
ကိုဆူး ... ညီမမေက ဘက်မစုံပါ၊ ကိုဆူးကသာ ပိုပြီး ဘက်စုံပါတယ်နော်။ :)
Yin ... ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီကဗျာလေးက ဦးဟယ်ရီရဲ့ တိမ်လှိုင်းတို့ရဲ့ဝှက်ဖဲ ကဗျာကို ကွန်မန့်ထဲမှာ ပြန်ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာပါ။ ဦးဟယ်ရီရဲ့ ကဗျာထဲမှာ "ခင်ခင်" လို့ ခေါ်ပြီး ရေးထားလို့ ကျမက စ-ချင်တာနဲ့ "ခင်ခင်" နာမည်နဲ့ ပြန်ရေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမရေးတယ်ဆိုတာ ဦးဟယ်ရီ သိပါတယ်။ ကျမက အဲဒီလိုပဲ ရေးနေကျပါ။ ခင်ခင်ဆိုတာ ကျမရဲ့ ကလောင်ခွဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ကဗျာကို နှစ်သက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2/07/2013 11:06 AM
Thank you Ma May Dar for your explanation. This poem is one of my favorite ones.
ကဗျာလေးက အိမ်လွမ်းနေသူကို ပိုလို့ လွမ်းစေတယ်..မမေက ကဗျာလည်း ရေးကောင်း...
အိမ်လွမ်းသူအဝေးရောက်တွေရဲ့ ရင်ကို တည့်တည့်မှန်
မမေကမှ သည်ကြားထဲမှာ အိမ်ကို တစ်ခေါက်တစ်ကျင်း ပြန်ဖြစ်သေးတယ်...ကျွန်တော်တော့ ပြန်မရောက်ဖြစ်တာ ဆယ်နှစ်တောင်ရှိပါပကောလား...ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ကိုယ် ဖောက်ခဲ့တဲ့တံခါးကနေ လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်း မဖြောင့်ဖြူးသမျှတော့ နောက်ပြန်မလှည့်ရဲတဲ့ သတ္တိနည်းမှုတွေကြောင့်ပေါ့လေ...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သည်တစ်နွေတော့ အိမ်ပြန်ဖြစ်ဖို့ သေချာပါပြီ... ကဗျာကို အခုလို အိမ်ပြန်ဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးမှ ဖတ်ရတာ တော်သေးတယ်...အရင်ကဆို ကိုငှက်ရဲ့ အမေ့အိမ်သီချင်းတောင် နားမထောင်ရဲတဲ့အထိ...
ကျနော်လည်း အဲ့လိုဖြစ်နေတယ် အစ်မရေ
သတိရတယ် နေကောင်းတယ်ဟုတ် ။